Amakhadi Ebhizinisi Abalobi - Print Peppermint
Dlulisa amehlo ku- imibono emihle kakhulu yamakhadi Ebhizinisi Ayingqayizivele. Ukuncintisana kulo mkhakha kunzima, okusho ukuthi udinga ukugqama ngekhadi elifanele. Noma ngabe ufuna izibonelo zesimanje, zokunethezeka, noma ezingabizi, uqinisekile ukuthola okuthile.
3 Imibono Ehlukile yango-2021
Umbono # 1
Umugqa wobuciko obulula womugqa wesiginesha yesiginesha emnyama, i-letterpress deboss ephrintiwe.
Umbono # 2
Igolide le-foil elibhalwe uphawu lwesitembu esisemthethweni.
Umbono # 3
Ukubethelwa okuyimpumputhe kophawu lombuso lapho kusebenza khona ibhizinisi lakho elilungisa izivumelwano.
Ama-Super Unique, Amakhadi Ebhizinisi Elibizayo
Oda ISAMPULA Iphakethe
I-logo ye-Creative ne-Services design services
Enza ngendlela oyifisayo isifanekiso
Khetha ithempulethi yokwakha i-Notary Business Cards, bese masengeza uphawu lwakho nemininingwane yokuxhumana.
Qasha abaklami bethu bezithombe
Gcwalisa ifomu elifushane bese uvumela ithimba lethu lokuklama lenze umbono wakho ube ngamakhadi wamabhizinisi angama-notary ayingqayizivele.
Amakhadi Ebhizinisi Eliphrintiwe
Ama-notaries anomunye wemisebenzi ebaluleke kakhulu emhlabeni. Baphethe amadokhumende ezezimali futhi bafunga abantu abaningi. Ngakho-ke, abakwazi ukukhokhela noma yikuphi ukungahambi kahle noma ukunganaki okwenziwe ngobuchwepheshe. Umsebenzi wabo unesizotha futhi banesimo sengcweti ebalulekile yingakho konke abakudingayo ukuze babe nekhadi lebhizinisi elisebenza kahle ngaso sonke isikhathi.
Izibonisi ze-Notary Card Card
Peppermint kuprinta izifanekiso zamakhadi webhizinisi le-notary zinikela ngemiklamo emihle kakhulu yomphakathi wama-notary. Izifanekiso zenziwe ngezifiso; ungaziguqula ukuze zigqamise amaphuzu wokuthengisa ahlukile ebhizinisini lakho. Ungakhombisa ukugunyazwa kwakho kobungcweti, uzame nge-typography, futhi uguqule ama-palettes ombala, usebenzisa ubuhlakani bakho ngokugcwele.
Ingxenye ehamba phambili, akudingeki ube yi-maestro yokuklama ukuze usebenze nesoftware yethu enembile. Konke okudingayo ugqozi nokuchofoza okumbalwa lapha nalaphaya. Konke okunye kuyanakekelwa!
Ama-notary engamela ukuthengiselana okubalulekile, yingakho amakhadi awo ebhizinisi kufanele abe nekhwalithi yobungcweti. Sakhele zonke izifanekiso zamakhadi ebhizinisi kungxenyekazi yethu, sikugcina lokhu engqondweni.
Ukubonisa ngale futhi kuyingxenye ebalulekile yebhizinisi le-notary. Izinsizakalo zakho zidinga ukukhuthaza ukwethemba nokuzethemba. Ngomhleli wethu wekhadi, ungalayisha ama-headshots akho nezithombe zakho futhi wenze ikhadi lakho lebhizinisi wenze ngezifiso ukwakha ubudlelwano obuseduze namakhasimende akho.
Peppermint ukuphrinta kufuna ukuthi inhlansi yakho yokudala ikhanye. Asikukhawuleli kwisifanekiso.
Lapho usunomklamo oqediwe, ungawulanda nge-PDF esezingeni eliphakeme bese wabelana ngawo kwizibambo zakho zokuxhumana nabantu. Ungadlulisela futhi ikhadi lakho lebhizinisi elibhalayo kubangani nosebenza nabo futhi uthole impendulo yabo ngaphambi kokuyethula kumakhasimende akho. Lokhu kwenza indlela yokukhangisa ephumelela kakhulu futhi engabizi kakhulu.
Unentshisekelo ekuphrintweni kwekhadi lebhizinisi lekhwalithi ephezulu? Sishiyele kithi. Peppermintukukhishwa kwebanga lezimboni kanye namasheya asimeme akhiqiza ikhadi lebhizinisi le-premium njalo. Asilokothi siyekethise kwikhwalithi ngokusebenzisa amaphrinta noma amakhophi. Amakhadi akho abhalwe ngopende wokuvikela ukukhuthaza impilo ende nokubukeka.
Ngokuzithoba kwesoftware yethu yokusebenziseka kalula, awudingi ukulinda izinsuku ezimbalwa ukuthi ube nesakhiwo sekhadi lebhizinisi esiphelile. Idizayini oyiqedile kusihleli sekhadi yilokho okuthola ephepheni. Uma uqaphele ukuklama okubonakalayo ngenxa yesikhala, sinezifanekiso zama-notary ezinamacala amabili webhizinisi lokuqhubeka nokukuhlalisa.
Ukuntula ugqozi? Sikubambile. Bheka iqoqo lethu lamakhadi ebhizinisi abhalisayo aklanyelwe ochwepheshe futhi uvuselele amajusi wakho wokudala. Lawa masampula anerekhodi eliqinisekisiwe lokushicilela okuhlala njalo kumakhasimende.
Peppermint ukuphrinta kunikeza izikhathi ezinhle zokushintsha. Sizoletha inqwaba elandelayo yamakhadi akho ebhizinisi ngqo emnyango wakho. Sisebenzisana nezinye zezinkampani zemikhumbi eziphephe kakhulu emhlabeni ukuqinisekisa ukulethwa ngokushesha. Ngakho-ke ulindeni? Yakha futhi uphrinte amakhadi akho ebhizinisi nge Peppermint namuhla!
Izithombe Ezihlobene Nesitoko
Shumeka kusuka ku-Getty Images